အမေးအဖြေများ -, Ltd. ရှန်ဟိုင်း Runwu ဓာတုနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Ltd. , ရှန်ဟိုင်း Runwu ဓာတုနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
အယ်လ် 50nm 99.9%
Co. , 50nm 99.9%
Cu 50nm ၉၉.၉%
W က 50nm 99.9%
iridium ကို Catalyst
Rhodium သည် Catalyst
အရသာ & မွှေးအကြိုင်
Aldehydes နှင့် Ketones
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်ကိုယ်စက်ရုံနဲ့ R & D ကိုအလယ်ဗဟိုရှိသည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များ, နေအိမ်ထဲကနေသို့မဟုတ်ပြည်ပမှာ, နွေးနွေးထွေးထွေးကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကြိုဆိုပါတယ်ကြသည်!
ဟုတ်ပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်များစွာသောကိစ္စများတွင် - - ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်လူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေသောအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူငါတို့သည်မတူညီသောဓာတုတုံ့ပြန်မှုအရသိရသည် Customize သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျသင်၏ operating ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်သင့်အား enable လိမ့်မည်ဟု နှင့်သင့်ဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
အသေးစားအလို့ငှာ 1-2 ရက်အတွင်းန်းကျင်နေသည် ဖြစ်. , bulk အလို့ငှာထုတ်ကုန်နှင့်အရေအတွက်နှင့်ညီသည်။
သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအရသိရသည်။ EMS, DHL, TNT, Fedex, UPS, လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး, ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည်တို့ကိုကျနော်တို့ကိုလည်း DDU နှင့် DDP ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့သည် T / T နေဖြင့်အကြံပြုထားတဲ့အနောက်တိုင်းပြည်ထောင်စု, Credit Card, သင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလီဘာဘာရွှေပေးသွင်းနေကြသည်, ငါတို့သည်သင်တို့အလီဘာဘာကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်မှတဆင့်ကပေးဆောင်လက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းသည်အလွန်တင်းကြပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့အားဖြင့်စေသောအမှန်တကယ်အရည်အသွေးအပြဿနာလည်းမရှိလျှင်, ငါတို့သည်အစားထိုးဘို့သင့်ကိုအခမဲ့ကုန်စည်ပေးပို့သို့မဟုတ်သင့်အရှုံးပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
No.500 Jianyun လမ်း, Pudong ခရိုင်, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်။
Nano boron nitride , Nano ခရိုမီယမ် nitride , Nano Tungsten Powder , Nano Co Powder Price, Nano Cobalt Oxide, Nano နီကယ် Powder ,